चितवनमा ९० किलो गाँजा बरामद | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:०७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । चितवनमा प्रहरीले ९० किलो गाँजा बरामद गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त आचार्यको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–१२ परखाल भन्ने ठाउँबाट गाँजा बरामद गरेको हो ।
यातायात सिन्डिकेट हटाउने सहमति, बिमा विवाद कायमै
काठमाडाैँ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच समिति खारेज गर्ने तथा सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सम्झौता भए पनि सवारी दुर्घटनामा परेका…
गोकर्ण विष्टले राम्रो गर्न खोज्दा ९ हजार नेपाली मलेसियाको कालो सूचीमा !
काठमाडाैं । मलेसियाको कलिङ भिसा लिएर पनि नआएपछि करिब नौ हजार नेपाली कामदार कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
बेरोजगार हुनुहुन्छः महानगरले दिन्छ तपाईँलाई काम
काठमाडौं । बेरोजगार नागरिकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले रोजगारी दिने भएको छ । त्यसका लागि वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगारीको विवरण बुझाउन…
भारत लैजाँदै गरिएकी किशोरीको सीमाबाट उद्धार, एक युवक पक्राउ
विराटनगर । नेपाली किशोरीलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा एकजना पक्राउ परेका छन् । भारतको जोगवनी नजिकै विराटनगर महानगरपालिका–१५ बाट…
डिआईजीहरुको सरुवा र पदस्थापन, कुन प्रदेशमा को इन्चार्ज ?
काठमाडौं । डिआईजीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन भएको छ। गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा मनोज नेउपाने तथा प्रहरी एकेडेमीमा पुष्कर…